Despotism 3k bu ihe eji enyere ndu aka Gam akporosis
Despotism 3k bụ indie akụ simulator nke ụmụ mmadụ bụ ndị kasị baa uru gị bara uru
Despotism 3k bụ indie akụ simulator na nke gị kasị iju gị anyaYou ga-ahụ maka nrigbu ndị ahụ ga-enye gị ohere ịnweta ike dị mkpa iji mepụta alaeze nke gị.
Un simulator dị ka mba ndị ọzọ nke ahụ abiala na Storelọ Ahịa Play na ebumnuche niile nke ịbụ egwuregwu pụrụ iche na ire ere otu izu ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ezigbo egwuregwu egwuregwu. N'ezie, anyị dọrọ gị aka na ntị na ọ bụghị mmadụ niile ka egwuregwu a mere.
1 Na ọnọdụ ya enyocha
2 Likemụ mmadụ dị ka sap nke igwe gị na Despotism 3k
3 Daysbọchị 20 ijide
Na ọnọdụ ya enyocha
Despotism 3k na-etinye gị n'ihu onye nyocha nke ị kwesịrị ịma otú e si eji ụmụ mmadụ eme ihe bara uru na ị ga-enwe n'aka gị. Ihu ọma, ị ga - enwe usoro / igwe ga - enyere gị aka iwepụta ike dị mkpa maka ihe niile iji aga nke ọma yana alaeze gị nwee ọganiihu.
Ka ụmụ mmadụ na - erite uru na alaeze gị, yabụ ị ga - eme ya tinye ha n’ọrụ, ka ha mụọ ọmụmụ, iji sie ma mepụta ike ahụ iji kwado "igwe" a ga - ewepụta n'otu ihuenyo nke ekwentị gị. Egwuregwu nke anyị na-egwu iji bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "chi" na nke anyị ga-amata etu anyị ga-esi jikwaa mmadụ ole anyị kwesịrị iwepụta ume ma ọ bụ mmadụ ole ga-eme nri ahụ ndị ọzọ ga-eri.
Ihe niile ga - eme n'otu ihuenyo ebe I nwere akpa nke ụmụ gị na-ezu ike na ị ga-eji na igwe ndị ọzọ ebe ị nwere ike ịmepụta ume, mụọ, sie nri ma mepụta nnwale ndị ọzọ na ụmụ mmadụ ndị ike gwụrụ. Ọ dịkwa mkpa ka ị payaa ntị na ike ọgwụgwụ nke onye ọ bụla, ebe ọ bụ na ha nwere ike karịa mgbalị ha wee nwụọ.
Likemụ mmadụ dị ka sap nke igwe gị na Despotism 3k
Na elu ị nwere usoro nko nke ga-eme ka ị kwaga ụmụ mmadụ site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ iji jikwaa ha nke ọma ma ị nwere ike ịga n'ihu na-emepụta. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ na simulator, ị ga-enwe ike melite igwe estancia iji nwekwuo mmadụ n'otu oge n'otu ebe ma mepụta ihe ndị ọzọ; nakwa dị ka dị iche iche ndozi nwere ike kwukwara ka anyị na-enwe ọganihu.
Akụkụ random nke Despotism 3k bụ nke atọrọ site na tebulu na ọ bụla 20 sekọnd ngụda amalite ọzọ nke mere na n'oge ụfọdụ oge pụrụ iche na-eme. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ mmadụ ịrapara na igwe na-emepụta nri ma ị ga-ekpebi ihe ị ga-eme ya. Dabere na mkpebi gị, ịnwere ike iwepụtakwu uru ma ọ bụ ọnwụ nke ya ka ị wee hụ n'ime ebe ọ ga-esi dịrị na igwe, belata arụmọrụ ya.
Ndị pụrụ iche oge na-etinye icing na achicha nke ahụmahụ dị omimi nke a na-enye. Jikerekwa, nihi na odighi nfe. Will ga-ebuli igwe ahụ n'ụzọ dị otu a ka mmadụ ọ bụla wee baa uru ka ị ga n'ihu na-emewanyewanye ma na-enwe ọganihu n'ime ụbọchị iri abụọ nke egwuregwu ọ bụla dịruru. Ma nke ahụ bụ ozi ahụ, ịtachi obi ụbọchị iri abụọ.
Daysbọchị 20 ijide
Despotism 3k bụ egwuregwu dị mfe ijikwa, mana nke ị ga-egwu ugboro ugboro iji mụta ịkwọ ụgbọala dị ka nna ukwu. Nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa ịmara Bekee maka nkwụsị ndị ahụ ị ga-agụ ederede iji nwee ọtụtụ nhọrọ dịka azịza ya. Nwere ike ime ya enweghị usoro, mana ọ ga-esiri gị ezigbo ike. Ma nke ahụ abụghị ịgụta ihe ndị ahụ na-etinye ihe ndị dị mgbagwoju anya na egwuregwu ka ị nwee egwuregwu ruo ọtụtụ ọnwa.
Teknụzụ ọ bụ egwuregwu na-ahụ anya nke ukwuu na akwa pixel art o n’eburu n’obi ya. N'ịbụ otu ihuenyo ahụ, ọ naghị echekwa nkọwa na ị ga-enwerịrị ike ị toa ntị na ihe niile emepụtara iji ghọta usoro dị iche iche arụ ọrụ. Site na obere ọkụ ahụ na-egosi njedebe nke usoro ma ọ bụ nko ahụ nke edoziri iji kpochapụ igwe mmeputakwa nke ihe omume ọjọọ na-eweta ... Black ọchị dị ebe niile na egwuregwu a.
Despotism 3k bụ a simulator dị ka ndị ọzọ na anyị na-agba gị ume ka ị nwaa nakwa na ị nwere ndidi zuru oke ịghọta usoro ya, ebe ọ bụ na ọ na-ezo nnukwu ahụmịhe ma ọ bụrụ na anyị mara etu esi aghọta ya. A adịchaghị aha na otu izu bụ na ọkara price nke mere na ị nwere niile ọdịnaya site na ịkwụ ụgwọ na na nti ihe na ọ bụ mara na ya Mmepụta na-emelite ya. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye gamer, ị ga-anwale ya. Anyị na-ahapụ gị na-akwado gị a jụụ ogige ntụrụndụ simulator.
Iche echiche adighi 3k
Nnukwu ihe osise
Nwere ụmụ mmadụ dị ka "ndị ohu"
Ọ na-ewe oge iji bụrụ onye nkuzi
Developer: Egwuregwu Konfa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Despotism 3k bụ indie akụ simulator nke ụmụ mmadụ bụ ndị kasị baa uru gị bara uru
OPPO Reno2 enweela ụbọchị ngosi ngosi